Banyere | Royal Arabian DMC
gbasara Anyịeze 212022-05-23T17:43:58+05:30
Companylọ ọrụ njikwa ebe adịchaghị na UAE
Royal Arabian Njikwa akara aka, nke e guzobere na 2004 bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ebe nlekọta na-ebuga ọtụtụ ihe atụ. Nchịkọta njem, Ntụrụndụ (FIT na otu), na MICE ngwọta in UAE.
Guzobe n'afọ 2004, Royal Arabian bụ a UAE-dabere na ebe nlekọta ụlọ ọrụ. N'ụzọ bụ isi dabere na Dubai, na-enye obi ụtọ UAE Ngwunye njem nlegharị anya nye ndị ahịa ya ozugbo, ndị ọrụ na-enyere aka, ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya, ụlọ njem na mkpali, na bọọdụ njem iji nye ọrụ ama ama nke kachasị mma.
Anyị na-elekọta ndị njem nleta si n'akụkụ ụwa niile. Ọtụtụ n'ime China, India, Vietnam, Pakistan, Hong Kong, Cambodia, Indonesia, Russia, mba GCC, Europe, Africa, na Latin America. Anyị kere-agaghị echefu echefu ezumike n'ihi na ọtụtụ ndị ọbịa na afọ ndị UAE. Anyị bụ ngụkọta nke ndị ọrụ 350+ gbasaa gafee mba dị iche iche nwere ụlọ ọrụ na India, China, na UAE.
The United Arab Emirates bụ a n'usoro iwu obodo nke asaa emirates; Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al-Quwain, Ras al-Khaimah, na Fujairah. E hiwere gọọmentị etiti na 2 Disemba 1971.
The UAE dị na North East nke Arab Peninsula ma kpuchie ebe yiri triangle. Nke UAE Mpaghara dị ihe dịka 71,023.6sq km nke ala, gụnyere ụfọdụ agwaetiti dị na Arab Gulf, na mgbakwunye na 27,624.9sq km nke mmiri mpaghara. Abu Dhabi bụ pasenti 84 nke mkpokọta ala obodo ahụ. Abu Dhabi City bụ isi obodo UAE Federation.
Onye nwe ya n'oge Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan bụ onye mbụ President nke UAE ma mara ya dika Nna nke mba. Asụsụ gọọmentị nke UAE bụ Arabic. Islam bụ okpukpe ọchịchị na mba UAE; a na-ekwe omume okpukpe ndị ọzọ.
The United Arab Emirates, otu n'ime njem nlegharị anya na-eto ngwa ngwa n'ụwa, nwere ihe niile dị mma maka ezumike na-agaghị echefu echefu, anyanwụ, ájá, oké osimiri, egwuregwu, ịzụ ahịa na-apụghị imeri emeri, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ kachasị elu, omenala omenala na-adọrọ adọrọ, na ebe nchekwa na-anabata.
Emirati Dirham bụ ego gọọmentị nke UAE, nke akpọchiri n'ihu ọha dị ka AED. Mbibiri ndị na-akwadoghị gụnyere DH na Dhs. E nwere ihe karịrị 200 mba bi na-arụ ọrụ na UAE. Obodo mbịarambịa karịrị ndị bi na ya UAE mba.
Ka ịbụ akara adịchaghị mma na-enye ọrụ njikwa ebe n'ofe UAE site n'inweta nguzozi nkwekọ n'etiti ọrụ azụmahịa, gburugburu ebe obibi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Iji nye ezumike echefu echefu.
Iji hazie mmemme mara mma.
Zụlite ngwaahịa ọhụrụ na asọmpi.
Na-ebuli usoro ime ime elu mgbe niile.
Anyị ji kpọrọ ihe
Afọ ndị ahịa.
Mmụọ otu siri ike.
Iguzosi ike n'ezi ihe na ịdị umeala n'obi.
Mmelite na-aga n'ihu.
Gịnị mere Royal Arabian?
Nke a bụ ụfọdụ n'ime isi differentiators na-enyere anyị aka na-enye anyị ọbịa ihe magburu onwe ahụmahụ na UAE.
Isi ụlọ ọrụ na Dubai ma nwee ụlọ ọrụ na Abu Dhabi nwere ndị ọrụ nkwado ensemble iji nye ọrụ na-enweghị nsogbu.
ebe ọ bụ na 2004
Ahụmahụ ihe karịrị afọ iri na njikwa ebe na UAE.
Mmekọrịta na ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma na ndị na-enye ọrụ iji hụ na ọrụ ọkwa ụwa.
Ngwungwu kpara nkata n'elu n'ebughị ụzọ mebie ịdị mma iji nyefee ndị ahịa uru.
Ndị ọrụ ọtụtụ asụsụ
Ndị ọrụ na-asụ Russian, Chinese, Arabic, Hindi, Vietnamese, Bahasa, Malay, Nepali, Dutch & Portuguese Portuguese.
Mgbasawanye pụtara ìhè site na otu ndị otu 4 ruo ihe karịrị ndị ọrụ 350+.
Rịọ oku azụ site na Royal Arabian
Ọkachamara Njikwa Nleta Njem Nleta anyị ga -akpọtụrụ n'ime otu ụbọchị azụmaahịa ma ọ bụ obere.